Kutheni Abanye Abantu EBhayibhileni Bengachazwanga Ngamagama? | Imibuzo Yabafundi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Kwincwadi yeBhayibhile kaRute, enye indoda engazange ivume ukwenza umsebenzi wayo ngokuvisisana noMthetho kaMoses, ibizwa ngokuba nguZibani-bani. (Rute 4: 1-12) Ngaba ke ngoko sifanele sigqibe kwelokuba bonke abantu abangachazwanga ngamagama, baneempawu ezimbi okanye ababalulekanga ngokwaneleyo?
Akunjalo. Cinga nje ngomzekelo owahlukileyo. Ukuze alungiselele iPasika yakhe yokugqibela, uYesu waxelela abalandeli bakhe ukuba ‘baye esixekweni kuZibani-bani’ baze balungiselele ekhayeni lakhe. (Mateyu 26:18) Ngaba simele sicinge ukuba le ndoda kuthiwa ‘nguZibani-bani’ kule vesi yayinobubi okanye yayingabalulekanga ngokwaneleyo ukuba ichazwe ngegama? Akunjalo tu, ngokuqinisekileyo lo ‘Zibani-bani’ wayengumfundi kaYesu. Ekubeni igama lakhe lingabalulekanga kule nkcazelo, lashiywa.
Ngaphezu koko, iBhayibhile inamagama abantu abaninzi ababi; ikwanayo nemizekelo yabantu abathembekileyo abaninzi abangachazwanga ngamagama. Ngokomzekelo, igama lebhinqa lokuqala, uEva, laziwa kakhulu. Sekunjalo, ukuzicingela yedwa nokungathobeli kwakhe kwaba negalelo kwisono sika-Adam, kwasizisela sonke imiphumo ebuhlungu. (Roma 5:12) Ngokwahlukileyo, umfazi kaNowa akachazwa ngegama eZibhalweni, kodwa sinombulelo ngokuzincama nokuthobeka kwakhe ngokuxhasa umyeni wakhe kumsebenzi wakhe obalulekileyo. Ngokucacileyo, ukushiywa kwegama lakhe akuthethi ukuba akabalulekanga okanye uThixo akakholiswa nguye.
Bakhona nabanye abantu eBhayibileni abangachazwanga ngagama abadlala indima enkulu nebalulekileyo kwinjongo kaYehova. Cinga nje ngentwazana yomSirayeli eyayilikhoboka endlwini kaNahaman, intloko yomkhosi waseSiriya. Yathetha ngenkalipho kumfazi kaNahaman ngomprofeti kaYehova okwaSirayeli. Oku kwakhokelela kummangaliso omkhulu. (2 Kumkani 5:1-14) Nentombi kaYifeta, umgwebi wakwaSirayeli, yamisela umzekelo obalaseleyo. Yavuma ukuncama ilungelo lokutshata nokuba nabantwana, ukuze iphumeze isifungo esasenziwe nguyise. (ABagwebi 11:30-40) Ngokufanayo, kukho abaqambi beendumiso ezingaphezu kwe-40 abangachazwanga ngamagama kwakunye nabaprofeti abathembekileyo abaphumeza izabelo ezibalulekileyo.—1 Kumkani 20:37-43.
Mhlawumbi umzekelo ochukumisa ngakumbi ngulowo weengelosi ezithembekileyo. Kukho amakhulu ezigidi zazo, kodwa zimbini kuphela ekuchazwe amagama azo eBhayibhileni—nguGabriyeli noMikayeli qha. (Daniyeli 7:10; Luka 1:19; Yude 9) Zonke ezinye azichazwanga ngamagama. Ngokomzekelo, uManowa uyise kaSamson, wabuza enye ingelosi: “Ungubani igama lakho, ukuze xa lithe lazaliseka ilizwi lakho sikubeke?” Yathini xa iphendula? “Kutheni na ukuba ubuze igama lam?” Loo ngelosi ithobekileyo ayizange ivume ukwamkela uzuko lukaThixo.—ABagwebi 13:17,18.
IBhayibhile ayichazi kwimeko nganye ukuba kutheni amagama abanye abantu echaziwe namanye engachazwanga. Kodwa singafunda lukhulu kubantu abathembekileyo ababekhonza uThixo ngaphandle kokulindela udumo okanye ukubaluleka.